Saamicha loltoonni Eeltiraa ummata Tigraay irraan gahaa jiran ilaalaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSaamicha loltoonni Eeltiraa ummata Tigraay irraan gahaa jiran ilaalaa.
Osoo waa tokko hin dhiisin qabeenya ummataa bifa kanaan saamaa jiru. TPLF diina ummata Oromooti. Garuu ummani qulqulluun gaafa mootummaa biyya biraatiin saamamu nama aarsa.
Waraanni Eertiraa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa ba’uu fedha akka hin qabne beeksise
AMAJJII 30/2021. Mootummaan Eertiraa dantaa mataa isaaf lola mootummaan bilxiginnaa lammiilee isaa biyya Tigraay irratti godhe irratti kallattii hirmaachuun dhiibbaa garaagaraa uumaamaa turuu haalaa turaniyyuu ragaa argameen qabatamaan ta’uun barameeraa.
Mootummaan Eertiraa lola Tigraay irratti loltoota Birgeedii 40 akka hirmaachise kan himamu yeroo ammaa waltajjii dhoksaa gara kaaba Tigraay irratti godhataniin mootummaan bilxiginnaa Itoophiyaa humna isaa %80 ol waan dhumeef itti gadhiisnee yoo baane TPLF bayyanachuu dandessi, kanaaf humna dadhabaa bilxiginnaa kana cina dhaabanna jechuun addeessiteetti.
Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaan loltootni Eertiraa dafanii akka Tigraay keessaa ba’an gaafatus Eertiraan itti qoosteetti. Haala kanaan yeroo ammaa loltootni Eertiraa gara kaaba Tigraay itti walitti qabamuun akka taa’aa jiran barameera
Lola Tigraay keessatti ajajoota waraana olaanoo hedduu du’aan dhabde Shaabiyaan garuu waan kan dhoksuuf dhukkubaan Du’anii maqaa koronaan du’uu isaanii labsaa jirti.
Haala kanaanis torbe kana Generaala Girmaayee Gabire Yasuus jedhamu akka du’e ibsitee jirti. Duuti jeneraalota Eertiraa gar-malee himaamaa jiru kun uummata biyyichaa yaaddessaa jira.Ji’a tokko qofa keessatti jeneraalota Eertiraa 10 ol du’uu TVn biyyichaa gabaaseera.
Mootummaan Itoophiyaa ammoo hanga yoonaatti du’a jeneraalota isaa hin ibsin jira.
Waan nama dinqisiisuudha!. nafxanyummaan hundee gadi fageeffachuu kajeelaa jira. mootummaan abbaa irree nafxanyaa karoora isaa galmaan gahachuuf iddoo gara garaatti hojii fokkisaa eegale itti fufeera. guyyaa har’aa godina baalee ona dallo mannaatti uummata keenya jiraattota naannichaa hordoftoota amantaa muslimaa maqaa isin Alshabaabi jedhuun jumlaan hidhatti guuree jira!. sanaan boodas miidiyaalee gara garaatiin alshabaab toohadhe jechuun geeraraas jira. uummata nagahaan qa’ee ofii irratti bobba’ee galu kan badii tokko hin raawwatin sababa inni muslimaa fi oromoo ta’eef qofa maqaa uummanni keenya ittiin hin beekamne itti moggaasuun dararaa jiru!!.
Uummata oromoo dammaqaa!! .